နေနိုင်သူများ အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နေနိုင်သူများ အကြောင်း
Posted by ဂျစ်စူ on Nov 13, 2012 in Creative Writing | 40 comments
“အာဝါး..အားဝါး..အွား”….ဆိုပြီး ခေါင်းရင်းအိမ်က ခလေးငိုပြီဆို နာရီထမကြည့်နဲ့ ၊ သူငိုရင် ခုနစ်နာရီခွဲပြီမှတ်။
အငိုတိတ်သွားပြီလား အဲတာဆို ရှစ်နာရီထိုးပြီ။ ထပ်ငိုတယ်မလား အဲတာဆို ကိုးနာရီထိုးပြီ။
ဟုတ်တယ်ဗျ။ ခေါင်းရင်းအိမ်က ခလေးက အတော် အငိုသန်တဲ့ခလေး စိတ်ပျက်လောက်အောင်ကို ငိုနိုင်လွန်းတယ်။
ဟိုဘက် ဒီဘက် သွပ်ပြားကပ်ပြီး ခြားထားတဲ့ ကျနော့ အခန်းနဲ့ဆို ဒီဘက်အီးပေါက် ဟိုဘက်က ကြားတယ် ဟိုဘက်အီးပေါက် ဒီဘက်က ကြားတယ်။
အဲသလို အခြေအနေမှာ အွား..အွား..အွားနဲ့ငိုနိုင်လွန်းခေးလနဲ့ဘယ်လိုမှ အိပ်လို့ မရဘူးဗျာ။ အဲဒီ ငိုနိုင်လွန်းခလေးကို သူ့ အဖေနဲ့ အမေက ၀ိုင်းပြီး ချော့ပြီမလား..အင်း.သေချာပြီ ဆက်မအိပ်နဲ့ပြေးပေတော့ပဲ တစ်ရပ်ကွက်လုံး ဆူညံကောပဲ အဲသလို။
အဲဒီရပ်ကွက်လေးထဲက အိမ်တွေက အပေါ်မှာပြောသလို တစ်ခန်းနဲ့ တစ်ခန်း သွပ်ပြားလေးကပ်ပြီးခြားထားတာ လေးလုံးတစ်တွဲ သုံးလုံး တစ်တွဲနဲ့အဲသလို အတွဲစုလေးတွေပေါ့နော်။ ခြံတစ်ခြံကို သိန်းကို သောင်းနဲ့ ချီပြီးဈေးပေါက်နေတဲ့ ရပ်ကွက်ကြီးထဲမှာ တစ်ခန်းကို တစ်လသုံးလေးသောင်းနဲ့ငှားနေကြတဲ့ သုံးလေးသောင်းတန် အိမ်စုလေးတွေရှိတဲ့ ရပ်ကွက်လေးတစ်ခုမှာ ကျနော်နေတယ်ပေါ့ဗျာ။
အဲဒီမှာ မနက်မနက်ကောင်းကောင်း အိပ်လို့ မရအောင် ထထအော်တဲ့ ခလေးနဲ့ မိသားစုအကြောင်းချည်ပဲ ရေးရင် စာတစ်ပုဒ်ရတယ်။ ညဆို လမ်းဘေး ထမင်းရောင်းကြတယ်ဆိုတော့ ပြန်လာပြီဆို (၁၂) နာရီကျော် (၁) နာရီ၊ ဆိုင်သိမ်းလာတဲ့ဝန်စလွယ်နဲ့ငိုနိုင်လွန်းခလေးနဲ့တွန်းလှည်းနဲ့တစ်ခါတလေ လင်မယား စကားများလာတာနဲ့တစ်ရပ်ကွက်လုံး ညံရောပဲဗျာ။ကောင်းကောင်းကို အိပ်လို့ မရ။
မနက်ဆို ခလေးက ထအော်၊ လင်မယားနှစ်ယောက်က ချော့ကြ၊ ဒီကြားထဲ တရားခွေက ဖွင့်လိုက်သေးတယ်။
ခုနစ်နာရီကျော်ပြီဆို ခလေးအော်ပြီ၊ ချော့ကြပြီ၊ တရားခွေထဖွင့်ပြီ။ အဲတာ ခေါင်းရင်းကပ်အခန်းက မိသားစုရဲ့ နှိုးစက်ပဲ။
ရှစ်နာရီဆို ကြာနီကန် တရားခွေ အကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီ။ အဲတာ ခြေရင်းက အိမ်၊ ကြာနီကန်ဆရာတော် အော်ပြီဆို ရှစ်နာရီထိုးပြီမှတ်ပေရော့။ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ အရှေ့ အိမ်က တစ်ဂျောက်ဂျောက်နဲ့ စက်ချုပ်ပြီ။ အဘိုးကြီးက အကျယ်ကြီးအော်ပြီး ဘုရားရှိခိုးပြီ။မရှေးမနှောင်းမှာ မြောက်ဘက် အတွဲစုက ဘယ်အိမ်လဲတော့မသိ တစ်ရပ်ကွက်လုံးကို အေသင်ချိုဆွေတို့ချမ်းချမ်းတို့ သီချင်းဖွင့်ပြီး ဖျော်ဖြေတာ။
သူတစ်ယောက်ထဲ နားမထောင်ဘူးဗျာ တစ်ရပ်ကွက်လုံးကြားအောင် ဖျော်ဖြေတာ ဖျော်ဖြေတာ။
မနက်ကိုးနာရီ ၀န်းကျင်ဆို အူးဗိုက်တို့တိုင်ပတ်ပြီပဲ။
ခလေးကို ပြေးချော့ပေးရမလား၊ ကြာနီကန်တရား နာရမလား ခြေရင်းက ဖွင့်တဲ့ တရားနာရမလား၊ အေသင်ချိုဆွေနားထောင်ပြီး ဆက်အိပ်ရမလား တစ်ယောက်ထဲ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်ရပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ဟိုခလေး သေနာလေး။ သူငိုရင် လုံးဝကို နေလို့ မရတော့ဘူး၊ ငိုချက်က ဗျာ လုံးဝကို မရပ်တာ ဘုရားဆူးရချည်ရဲ့ တစ်ခါတလေ ငိုရင်း သေသွားမှာတောင် စိုးရတယ် အဲသလောက် မရပ်ပဲကိုငိုတာ နေ့ တိုင်း။
တစ်ခါတလေ ညလုံးပေါက် ဘီအီးလာသောက်တဲ့လူတွေလဲရှိသေးတယ်။ အိမ်ကျဥ်းကျဉ်းလေးထဲ လေးငါးယောက်စုပြီး စကားကြီးစကားကျယ်တွေပြောပြီး သောက်ကြတာ ညလုံးပေါက်။
ဒီ ငမူးအသံတွေနဲ့ထမင်းဆိုင်သိမ်းပြန်လာတဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ညညဆို မူးပြီး အိမ်တကာ ပိုက်ဆံလိုက်ချေးတဲ့ ရပ်ကွက်လူကြီးသားနဲ့ ဒီလူတွေကြားမှာ ခင်ဗျားဆို နေမလား ပြော။ မနေနိုင်ဘူးမလား။အင်း မနေနဲ့ ။ကျနော်လဲ နေနိုင်ဘူး။
ဒါပေမဲ့သူတို့ တွေနေကြတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ဆူဆူ ဂရုမစိုက်ကြဘူး၊ ရန်မတွေ့ ကြဘူး။ အဖက်မလုပ်ဘူး၊ မညိုညင်ကြဘူး။ အဲဒီအသံတွေဟာ ဆူညံသံတွေမဟုတ်ဘူး အဲဒီအသံတွေကို နားထောင်ပါများလို့နားယဉ်ပြီး ဆူညံသံတွေက နှိုးစက်အဖြစ် ပြောင်းသွားတယ် ထင်ပါတယ်။ ကျနော့်အတွက်တော့ နားငြီးလို့ဒေါသတွေထွက်ပြီး အကုသိုလ်တွေပွါးနေတာ သူတို့ ကတော့ ဘယ်လောက်မူးမူး ဘယ်လောက်ဆူဆူ ဂရုမစိုက်ပဲ ရင်းရင်းနီးနီး နေနေကြပြီး သူတို့ လုပ်ချင်တာတွေပဲ လုပ်နေပါပကောဗျာ။သြော်..နေနိုင်သူများပါတကားလို့ ရယ်သာ ချီးမွန်းထောပနာ ပြုမိပါတယ်လေး။
နင်လည်း သူရို့လို နေနိုင်အောင် ကျိုးစားပေါ့ …
ဒါများ လွယ်လွယ်လေးဂို …
နာဒါဆို အိုက်ဂလိုနေရာမျိုး နေချင်ဒါ …
ဒါမှ နှိုးစက်လည်း ဝယ်စရာ မလို …
ရသစုံလည်း ကြားရ၊ မြင်ရ ..
ဘီလောက် နိပ်သလဲလို့ …..
ဟုတ်ဘူးလား …. ငဗိုက်ရာ …
အာ့ဆို စိတ်ကောက်ပြီး အငိုသန်တဲ့ ကောင်မလေး ကို အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားလိုက် ဗိုက်ဗိုက်။
သူ့ချော့နေရတာနဲ့ ဘယ်မှ အာရုံရောက်ဘူးရယ်။ ပလာဒါလိုချင်လို့ ငိုလိုက်၊ အက်ပဲ ဝယ်ပေးဆို စိတ်ကောက်လိုက်နဲ့။
ကိုယ်တွေဆို ဆူညံဆူညံ ရပ်ကွက်လေးကိုလွမ်းလွန်းလို့။
ငအံရေ..နှိုးစက်က တစ်ချိန်လုံး မရပ်တာ ဆိုးတယ်ကွဲ့ 
ကြုတ်တို့ က အတက်ကြီးပြီဆိုတော့ နားငြီးမခံနိုင်တော့ဘူးကွဲ့ 
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နေနိုင်သူကြီးတို့ ရယ်…
အိုက်ဗူး အိုက်ဗူး ရပ်ကွက်ရုံးကခေါ်နေတယ်
ဟုတ်တယ်.. ဘာဖြစ်လဲ အဲလိုပြန်နေလိုက်ပေါ့
ကဲကြာပါတယ်.. အူးဗိုက် အိမ်မှာ သွားဝိုင်းလိုက်ကြတာပေါ့
တစ်ကယ်ကို အခြေခံလူတန်းစားရပ်ကွက်မှာ ဒိုးတူပေါင်ဖက်နေထိုင်ပြီး စာရင်းဇယားပြုစုနေသော စီအိုင်ဒီဗိုက်ပါကလား
မရွှေကျိရေ..ရုံးသွားပြီး ပြန်လာပါပြီ..ရပ်ကွက်လူဂျီးက သူ့ တူမနဲ့ဘောတူတယ်လို့ခေါ်ပြောတာခင်ဗျ
ဆရာအုပ်ရေ ကျနော့်အိမ်တော့ လာမ၀ိုင်းပါနဲ့ ..ကြမ်းခင်း အသစ်တွေ ၀ယ်ပေးနေရပါဦးမယ်
ကိုဗိုက် အခု အလုပ်တွေ အကုန်ရပ်
စာ ပဲ မှန်မှန်ရေးတော့
နီကိုရဲ နေရာ အစားဝင်လို့ ရတယ်
ဧဲ့ဒေါ့ ဗီe သောက်ပြီး 8 နေမင်း ဖင်ထိုးမှ ထ
ထွက်ခါနီး မှ ကိုယ့် ဗိုက်ကလေး စာကို တွေ့တယ်။
မင်းနားဆီမှာ တကယ်ကောင်း တဲ့ နာရီ တွေအများကြီးဘဲ။
ဒါထက် အဲဒီ တဗြဲဗြဲငိုတဲ့ကလေး က မင်းရဲ့ သားလေး များလား။
ဒီကလေး ကြီးလာရင် အဆိုကျော် ဖြစ်မှာ။
ကလေးအဖေက ကလေးငိုရင် ဘာတဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းဆိုတာတဲ့ “ဒို့သွေးလဲမဟုတ် ဒို့သားလဲမဟုတ် တို့အမျိုးလဲမဟုတ်တယ်”
ကဗိုက်ကမသိချင်ရောင်ဆောင် ဘီအီး အမူးသောက်
အူးဗိုက် ကလေးချော့တဲ့ သီချင်းက တမျိုး
ငါ့ ခြံထဲမှာ ဥ တဲ့ ဥ.. ငါ့ ကြက်မရဲ့ ဥ…
မိသားစုတွေ တစ်စုနဲ့ တစ်စု ကြမ်း တပြေးတည်း ၊ ထရံ တစ်ချပ်ပဲ ခြား ပြီး နေ တာ တောင် ကလေးတွေ တပြွတ် ပြွတ် မွေး နေကြတာ အံ့ ပါရဲ့ တော်။
“မနက်ကိုးနာရီ ၀န်းကျင်ဆို အူးဗိုက်တို့တိုင်ပတ်ပြီပဲ။
အဆိုးဆုံးကတော့ ဟိုခလေး သေနာလေး။ သူငိုရင် လုံးဝကို နေလို့ မရတော့ဘူး၊ ငိုချက်က ဗျာ လုံးဝကို မရပ်တာ ဘုရားဆူးရချည်ရဲ့ တစ်ခါတလေ ငိုရင်း သေသွားမှာတောင် စိုးရတယ် အဲသလောက် မရပ်ပဲကိုငိုတာ နေ့ တိုင်း။”
မြင်ရ ကြားရဒါများ ရင်မောထှာ……
စာပဲ ပုံမှန်ရေးမယ် ဘီအီးပုံမှန်လာတိုက်မလားပြော..
အန်ကယ်ကြီး ပေးတဲ့ ပုံပမာလေး ကြိုက်တယ်ဗျာ
တိုတိုနဲ့ထိမိတာမို့ကြိုက်သဗျာ
အူးပေါက်ရေ ဘီအီးပုံမှန်သောက်တာတောင် နေဖင်မိထိုးခင် နိုးရပါတယ်ခင်ဗျ
အရီးရေ ငယ်ငယ်က ဒီလော်အော်ပြီး ကြီးလာမှ အာဇာနည်လောက် မအော်နိုင်ရင်တော့ အဲဒီအာဗြဲ
အူးဗိုက်နဲ့ တွေ့ ပြီမှတ်
မရွှေအိရေ…အိမ်ရိပ် အနင်းမခံခိုင်းလို့ တော့မရဘူး..မူးပြီး ဘီအီးဘိုး လိုက်ချီးတဲ့အဖွဲ့ ထဲ ကျနော်လဲ ပါတယ်ဗျ
ကျေးဇူးပါ မန်နေကြာ မဆူခင် လဘက်ခြောက်ခပ်..အဲလေ..မဆူခင် အလုပ်လုပ်လိုက်ဦးမယ်..
အန်တီမိုချိုရေ..ဒီဘက်နင်းရင် ဟိုဘက်ခန်းက လှုပ်နေတဲ့ ကြမ်းတစ်ပြေး သွပ်တစ်ချက်ခြားကို ဘယ်အချိန်က မွေးနိုင်မှန်း
ကျနော်လဲ ဆင်းစားမရဘူးဖြစ်နေတာဗျို့ ..
အန်တီနိုဗွီရေ ဘုရားဆူးမိုးကြိုးပစ် တစ်ကယ်ပြောတာပါဗျာ.တော်တော်နေနိုင်တဲ့လူတွေပါ..ဒါတောင် ပြောစရာတွေများကြီး မရေးတတ်လို့ ထားခဲ့တာ
ဒေါ်မွန်ကစ်ရေ.ကျနော်တောထွက်မလို့ ပဲဗျာ..မိန်းမလဲ မယူနိုင်သေး ဘီအီးကိုလဲ မခွဲနိုင်သေးလို့ သာ ငြိမ်နေရတာပါဗျာ
သူတို့ကလည်းငြီးတယ်။ ဗိုက်ဗိုက် မူးလာရင် အပျိုလေးတွေအိမ် မှားတက်ပေါင်း များပြီတဲ့။ ဒါမျိုးကြတော့ ထုတ်မပြောဘူး။။ လူဇိုး… စီတုံးလေးနဲ့ပေးတွေ့မယ်..။
နောက်ခါ မမှားနဲ့ ဆို မမှားတော့ပါဘူး ဘိုးကြောင်ရေ..အဲသလိုတော့ မရက်စက်ပါနဲ့ …
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရထားတာ ဘယ်လောက်မိုက်လဲ….
ကျွန်တော်ဆို ညတိုင်းတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ နေရာကြားမှာနေလာတာကြာလာလို့ လားမသိဖူး…..
တခါတလေ အဲ့လိုဆူဆူညံညံလေးကို ကြိုက်သဗျို့ 
အကျင့်က စာကျက်ရင်တောင် တီးဆိုင်မှာ သွားကျက်ရင် ပိုမှတ်မိတယ်ဆိုတော့… ဟီးဟီး….
အဲ့ကိုးနာရီဝန်းကျင်ဆို ဘီအီးဆိုင်မှာ သွားနေဗျာ…နားအေးပါအေး…
ဘီအီးတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဗျာ… အနံ့ က ဆိုးပါဘိနဲ့ …..
တီးဆိုင်သွားမယ်လေ….. ဒါမှမဟုတ် လက်ဘက်သုတ်လေးဘာလေးသွားစားပေါ့……
ကိုမဲကြီးရေ…အာဗြဲလေးက အတော်ကိုဆိုးပါတယ်ခင်ဗျာ…ကြုံမှ သိမှာပါ
အူးလေးမွန်မွန်ရေ..ဘီအီးဆိုင်ပိုင်ရှင်က စောစောစီးစီးအကြွေးမပေးဘူးဆိုလို့မသွားရတာပါဗျာ
ရောမ ရောက်တော့လဲ ရောမ လိုကျင့်ပေါ့ မိဗိုက် ရယ် ..
ကျုပ်လဲ ဟို တစ်ရက်က အဲလိုရပ်ကွက်က သူငယ်ချင်းအိမ် သွားလည်ပါတယ် …
ဘေးအိမ်တွေက ဆူညံနေလိုက်တာ နားမခံသာဘူး …. စကားပြောသံတွေက အစ နားကိုငြီးနေတာပဲ …
အဲလိုပဲလားမေးကြည့်တော့ အမြဲ အဲလိုပဲတဲ့ .. နေနေကျသူတွေကတော့ ရိုးနေပီတဲ့လေ ..
သူ့ အရပ်နဲ့ သူ့ ဇာတ်ပဲ အေ့ …. :harr:
အဲလိုမှသဘောမထားနိုင်ရင် ဦးဗိုက်လဲ BE မူးပြီးပြန်ကော်
တုပ်ကလဲ့စားချေလိုက်လေ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သွာအောင် ……..
သီရိဂေဟာ ဆိုတာ အဲလိုနေရာမျိုးပေါ့ဟဲ့ ဗိုက်ကလေးရဲ့…
နေရခဲဘိခြင်း… :hee: :harr:
ပျင်းတတ်တဲ့လူတွေအတွက် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်ရှိတဲ့ ရောမရပ်ကွက်ပါဗျ..အူးဗိုက်နဲ့ကွက်တိပါပဲ
အူးမိုက်ရေ နေရခဲဘိတဲ့နေရာမှာ နေရတာမို့ကျနော်ကံထူးတာပေါ့ဗျာ..မှတ်သားလောက်ပါပေ့
အဲဒီအိမ်က ဘီအီးတိုက်မယ်ဆိုရင်ရော နေနိုင်လား ဗိုက်ကလေးရဲ့ ။
ဗိုက်ဗိုက် မနေနိုင်ရင် ဦးကြောင်က သူအမှုဖြစ်နေတဲ့ အိမ်မှာ လာနေပါတဲ့ ။ လောလောဆယ် အဲ့ဒီအိမ်မှာ ခိုတကောင်ပဲ နေတယ်တဲ့
ဒေါက်တာရေ..ဘီအီးတိုက်ရင်တော့ နေ့ ရောညရော နေနိုင်သူကြီးပါခင်ဗျ..မတိုက်လို့ဆိတ်ဆိုးနေရတာပေါ့..
အန်တီပူးခ်ျရေ..အူးကြောင်ရဲ့ အိမ်တော့ မနေပါရစေနဲ့ကြေးမုံကြီးနဲ့တရားပြိုင်နေရပါဦးမယ်
အူးလေးကျောင်းဒဂါရေ..တစ်ကယ်ဘုရားဆူး ကြားရပါတယ်ဗျာ…ကျန်တာတော့ ဆက်တွေးကြည့်ပါတော့
ပျောက်နေသူများ ပြန်ပေါ်လာတာတွေ့ ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျ..ထီပေါက်ရင် ဘီအီးအ၀တိုက်ပါ့မယ်။
မန့်တာတွေက တက်ပြီးရင်း တက်ရင်းဆိုတော့…
မနေနိုင်တော့လို့ ၀င်ရေးရတော့မယ်။ :harr:
အန်တီမမရေ..နေနိုင်သူတွေကို အားကျလို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ၀င်ရေးမိတာပါဗျာ..
အန်တီမအိရေ….ငိုတာက ကျန်းမာရေးကြောင့်လဲ ပါမယ်ထင်ပါတယ်..အချိန်မှန်ငိုနေတာလေးတစ်ခုပဲ
ဆွေမျိုးတွေ လာလည်တဲ့နေ့ ဆို ပို အံ့စရာကောင်းအောင် နေနိုင်ကြသူတွေပါပဲခင်ဗျား..